Kalitao, fikirakirana gong solosaina Advanced CNC, fikosoham-bolo Gantry, loha angle, masinina saron-tava, mpanamboatra milina famaky efatra, vitaina any Chine - Dongguan Tuoyuan Precision Machines Co. LTD.
Fanodinana ampahany amin'ny masinina
Masinina fanodinana CNC
Machining lathe CNC
Fametahana axis efatra an'ny CNC
Decameter CNC gantry fikosoham-bary
Masinina kofehy sofina
Kojakoja masinina saron-tava
Hety masinina sofina
Ny nify masinina fiaramanidina maty
Conveyor fehikibo masinina
Fitaovana fitaovana milina
Dongguan Tuoyuan Precision Machines Co., Ltd. dia naorina tamin'ny 2016 ary nandalo ny fanamarinana rafitra fitantanana kalitao ISO9001. Nanomboka ny taona 2016 dia nirotsaka amina serivisy fanamboarana tokan-trano (welding welding, fanamboarana metaly, famafazana ary fanodinana CNC) ilay orinasa dia mahatratra 5000 metatra toradroa ny velarany, misy renivohitra voasoratra anarana 10 tapitrisa yuan ary totalin'ny Mpiasa 60. Ny atrikasa voalohany dia ao amin'ny No. 101, Taixin Road East, Xinguyong Community, Distrikan'i Wanjiang, Tanànan'i Dongguan. Izy io dia mazàna miasa amin'ny fanodinana sy ny fanangonana ny ampahany mazava tsara amin'ny fitaovana mandeha ho azy tsy mahazatra, ary koa ny famolavolana sy ny famokarana clamping. Ny atrikasa faharoa dia ao amin'ny Xiaohe Village, Daojiao Town, Dongguan City. Izy io dia manodina indrindra ny fandriana milina fanapahana laser, takelaka lehibe misy fitaovana lehibe, takelaka jiro, takelaka misy rindrina sy rindrina, mankaleo, manodina ary manodina, sns. Misy mpiasa 45 mpamokatra, mpitantana 6, injeniera 5 ary mpanara-maso kalitao 4. Ny lehibe ny fitaovana dia ivon'ny milina CNC: mihodina, mihodina, manodina, manodina, sns sns.
Head famotoana zoro ankavanana
Vondrona mpampita sarontava fiaramanidina
Hety masinina milina fantsom-bava tarehy
Decameter CNC gantry fikosoham-bary fitaovana lehibe fanodinana plate
Fanodinana aliminioma CNC lathes
Ny CNC dia manodina fanodinana POM mainty
Ny masinina fonosana planar ho an'ny ankizy dia maty
Fanodinana vy vy milina axis efatra
Fanodinana vy vita amin'ny vy vita amin'ny vy
Fanodinana polyurethane milina fanodinana CNC
Fanodinana vy ny milina fanodinana CNC
Address: Xinguchung Industrial Plant, Xinguchung Community, Wanjiang Street, Dongguan city
Ho an'ny fanontanina momba ny vokatra na pricelist anay dia mba apetraho aminay ny mailakao ary hifandray ao anatin'ny 24 ora izahay. Manana fikirakirana gong solosaina CNC izahay, fikosoham-bary Gantry, loha angle, masinina saron-tava, milina famaky efatra miaraka amin'ny CE.
Fepetra ara-teknika ho an'ny faritra sy ny masinina2020/11/25
Ny fizotry ny fanodinana ny ampahany dia ny fanovana mivantana ny fisehoan'ny akora mba hahatonga azy ireo vokatra semi-vita na vita. Ity dingana ity dia antsoina hoe fizotran'ny teknolojia.
Ahoana ny fitazonana ny milina fanodinana gantry?2020/11/25
Alohan'ny hampiasana ny fitaovan'ny milina dia ilaina ny manaiky raha mifanaraka amin'ny fepetra takiana ny haavon'ny menaka malefaka amin'ny spindle, ny lalamby fitarihana ary ny faritra hafa, na mifanaraka amin'ny fepetra takiana ny tsindry rivotra. Ny fandriana maotera dia azo ampiasaina aorian'ny fanekena ny fanarahana ny fepetra takiana. Ary avelao hirehitra mandritra ny 3 minitra ny milina. Hamarino raha tsy ara-dalàna ny fitaovan'ny milina.
© Copyright 2020-2021 Dongguan Tuoyuan Precision Machinary Co., Ltd.